Aza atao takalon'aina ataon'ireo masoivoho | Martech Zone
Zoma, Febroary 5, 2016 Zoma, Febroary 5, 2016 Douglas Karr
Mpanokatra maso ny fomba fanaovana ny asa aman-draharaha… ny fananako ny maso ivoho… ary tsy tsara tarehy izany. Tsy tiako ity lahatsoratra ity ho toeran'ny maso ivoho satria miombom-pihetseham-po amin'ny maso ivoho maro aho sy ny fanapahan-kevitra sarotra raisin'izy ireo. Raha vao nanomboka aho dia idealista tsy tiako ho tonga fa masoivoho - iray amin'ireo masoivohom-pananahana izay nanamontsina sy nanamaivana ny mpanjifa, nanosika hampiakatra azy ireo isan'andro, manambina sy mifamadika, na manome vola amin'ny mpiambina bebe kokoa rehefa mihodina izy ireo.
Nanana fifanarahana malalaka be izahay ahafahan'ny mpanjifa miala rehefa tian'izy ireo izany, saingy miverina amintsika indray izy io - imbetsaka. Raha tokony hampiasaina ivelany rehefa tsy mandeha ny raharaha dia manana mpanjifa marobe misoratra anarana eo ambanin'ny rafitra fisainany izahay, manery mafy hanao asa iray taonina mihoatra ny nampanantenainay, ary avy eo miala mba tsy handoavana izany. eny an-dalana. Nandany fotoana sy vola be izany taminay.
Izany dia nilaza fa mbola halantsika ny mahazo mailaka toy izao:
Miteraka olana roa lehibe izany. Voalohany, ny mpanjifa dia tsy manam-bola ary miankina amin'ny masoivoho nandaniany ny teti-bolany. Faharoa, sosotra amin'ny maso ivoho izao ny mpanjifa, ary tsy tsara ny vintana hisodinana. Midika izany fa mety mila miala izy ireo ary manomboka indray. Dingana lafo izay mety tsy zakan'izy ireo.
Miankina amin'ny fifanarahana amin'ny maso ivoho, mety ihany koa ny maso ivoho. Angamba nametraka ezaka an-taonina ho an'ny fisian'ity tranonkala ity ny masoivoho ary miasa amin'ny fifanarahana iray izay andoavan'ny mpanjifa drafitra fizarana vola. Mety maharitra fotoana fohy ilay tranonkala (na dia gaga aza aho fa misy mpanolo-tsaina SEO handray mpanjifa mifaninana). Mety tsy tranga takalon'aina mihitsy izany.
Raha mieritreritra ianao fa diso ny maso ivoho na manao ahoana na manao ahoana, dia azonao atao ny manamarina ireo fifanarahana nifanaovana nataonao. Ohatra, raha mamoaka sary mihetsika any amin'ny masoivoho iray isika dia mety hamerina ilay horonan-tsary haverina fotsiny. Ny ankamaroan'ny masoivoho dia tsy manome ny fisie After Effects raha tsy izany dia ampahany amin'ny fifanarahana. Raha te-hanova ny sarimiaina ianao dia mety tsy maintsy hiverina any amin'ny masoivoho loharano ary mahazo fifanarahana hafa eo amin'ny toerany.
Ahoana ny fomba hisorohana ny toe-javatra takalon'aina misafidy
Amin'ny marketing nomerika, izahay dia mamporisika anao hifanerasera amin'ny maso ivoho misy anao hatrany:
Domain Name - iza no manana ny anaran'ny sehatra? Ho gaga ianao amin'ny isan'ny maso ivoho misoratra anarana ny anaran'ny sehatra ho an'ny mpanjifa, ary tazomy. Izahay dia manao ny mpanjifa foana hisoratra anarana ary tompony ny sehatra.
fampiantranoana - raha manapaka ny fifandraisana amin'ny masoivohonao ianao dia mila mamindra ny tranokalanao amin'ny mpampiantrano hafa sa afaka mijanona miaraka amin'izy ireo ianao? Matetika izahay mividy fampiantranoana ho an'ny mpanjifantsika, saingy amin'ny anarany foana izany ka raha ilaozany izahay dia azon'izy ireo esorina fotsiny ny fidirantsika.
Fananana manta - Ny rakitra amboarina toy ny Photoshop, Illustrator, After Effects, kaody ary loharano hafa ampiasaina hampivelarana haino aman-jery hafa dia fananan'ny masoivoho raha tsy mifampiraharaha ianao. Rehefa mamorona infografika, ohatra, dia averinay ireo rakitra Illustrator hahafahan'ireo mpanjifanay mamerina azy ireo sy mampitombo ny sandany. Ho gaga ianao amin'ny maro tsy hanao izany.
Mividy mifanohitra amin'ny Lease
Miankina amin'ny fividiananao sy fanananao ny zon'ny asa rehetra ataon'ny maso ivoho izany, na raha mitazona ny sasany amin'ireo zon'ny asa ataony izy ireo. izahay foana ataovy mazava amin'ny mpanjifanay izany. Izahay dia namolavola vahaolana roa miaraka amin'ny mpanjifa izay nitahirizanay ny vidiny ambany tamin'ny alàlan'ny fifampiraharahana tamin'ny fifanarahana iray izay nitananay ny fananana. Midika izany fa azontsika atao ny mampiasa azy ireo indray ho an'ny mpanjifa hafa raha tadiavinay izany. Ohatra iray ny a tranokala toerana fivarotana nanamboatra taona maro lasa izay izahay tamin'ny alàlan'ny Google Maps.
Ny resaka ara-dalàna dia mety ho sarotra ny mamaky ao anatin'ny fifanarahana mahazatra mahazatra ka alao antoka fa fantatrao. Ny fomba tsotra dia ny manontany fotsiny hoe:
Inona no hitranga raha ajanona ny fifandraisanay amin'ny orinasa? Izaho ve no tompony sa ianao no tomponao?
Raha mila fanovana isika aorian'ny famaranana ny fifandraisan'ny orinasa, ahoana no hitrangan'izany?
Izaho koa tsy manery ato amin'ity lahatsoratra ity izay tokony hataonao foana mifampiraharaha momba ny fananana maso ivoho. Matetika dia afaka mahazo vidiny mifaninana amin'ny maso ivoho ianao satria efa nanao ny asa ifotony ary manana ny fananana sy ny fitaovana hanatanterahana asa. Ity dia mihoatra ny a lease or fizarana fifanarahana ary afaka miasa hahasoa anao raha maniry hitahiry vola ianao.
Ohatra, mety hamidy amin'ny tranokala iray manontolo sy ny haino aman-jery rehetra amin'ny $ 60k isika fa mifampiraharaha amin'ny $ 5k isam-bolana. Ny mpanjifa dia mahazo tombony amin'ny fananganana tranokala haingana fa tsy mila mandoa ny vola rehetra eo alohany. Saingy mahazo tombony ilay masoivoho satria rehefa mandeha ny taona dia manana fidiram-bola tsy tapaka izy ireo. Raha manapa-kevitra ny mpanjifa fa hanapaka ny fifanarahana fohy sy tsy mandeha dia mety hamoy ny fananana miaraka aminy koa izy ireo. Na angamba azon'izy ireo atao ny mifampiraharaha amin'ny sandam-bola hividianana ireo fananana.
Miara-miasa amin'ny mpisolovava anay izahay izao amin'ny famaritana tsara kokoa ity tolotra ity ho an'ny mpanjifa. Afaka manolotra fifanarahana telo samihafa izahay, ao anatin'izany ny fakan-kevitra madio tsy misy fananana, fanatanterahana izay itazonantsika ny zon'ny asa amin'ny taha ambany kokoa, ary ny fampiharana izay itazonan'ny mpanjifanay ny zon'ny asa amin'ny taha ambony kokoa.
Amin'izany fomba izany, ireo orinasa izay mino fa lafo loatra angamba isika dia afaka miara-miasa amintsika amin'ny taha ambany kokoa… fa raha mahomby isika, ary irian'izy ireo ihany ny zon'ny asa, ilain'izy ireo ny mifampiraharaha momba izany fividianana izany avy aminay. Na afaka miala fotsiny izy ireo, ary mitazona ny asa izahay mba hahafahanay manamboatra azy io amin'ny mpanjifa hafa.
Tags: fahafahana misafidyfifanarahana masoivohofifanarahana masoivohofifampiraharahana momba ny maso ivohofifanarahanatakalon'aina